Liverpool Oo Xasuuqday Everton, Mane Iyo Origi Oo Wacdarro Dhigay Xilli Reds Ay Sii Xajisatay Hogeenkeeda Sideeda Dhibcood | Laacib.net
Liverpool Oo Xasuuqday Everton, Mane Iyo Origi Oo Wacdarro Dhigay Xilli Reds Ay Sii Xajisatay Hogeenkeeda Sideeda Dhibcood
December 5, 2019 Balaleti Comments Off on Liverpool Oo Xasuuqday Everton, Mane Iyo Origi Oo Wacdarro Dhigay Xilli Reds Ay Sii Xajisatay Hogeenkeeda Sideeda Dhibcood
Liverpool ayaa sii xajisatay hogeenkeeda sideeda dhibcood ee horyaalka Premier League ka dib markii ay 5-2 ku qaarjiyeen kooxda deriskooda ee Everton iyadoo kulanka Merseyside Derby uu ka dhacay garoonka kooxda Reds ee Anfield.
Sadio Mane ayaa ahaa xiddiga garoonka isagoo shabaqa soo taabtay islamarkaana caawiye ka ahaa labo gool kale iyadoo Divock Origi uu isna labo gool dhaliyay xilli tababare Jurgen Klopp uu kursiga keydka dhigay xiddigahiisa waa weyn sida Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Henderson halka goolhaye Alisson uu ganaax ku maqnaa.
Liverpool ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 6aad markii ay kubad rogaalcelis ah soo qaadeen iyadoo Sadio Mane oo kubad dhexda ka soo jiiday uu baas fiican oo cajiiba hordhigay Divock Origi kaasoo kubada ka hor wareejistay goolhaye Pickford oo u soo baxay inuu qabsado, waxaana uu kubada cusjiyay shabaq faaruq ah.
Liverpool ayaa hogaanka ciyaarta sii dheereysatay daqiiqadii 17aad iyadoo Alexander-Arnold uu kubad dheer oo 60 mitir ah u soo qaaday Sadio Mane oo garabka bidix joogay, kaasoo isna baas fiican u dhigay Shaqiri oo ku guuleystay inuu kubada dabamariyo goolhayaha.
Daqiiqadii 21aad Everton ayaa gool soo ceshatay markii uu Lovren kubad si fiican u bixin waayay taasoo keentay inay lugta u gasho Keane oo shabaqa ku hubsaday.
Liverpool ayaa sii dheereysatay hogaanka ciyaarta daqiiqadii 31aad markii Lovren uu isna kubad dheer oo 50 mitir ah u soo qaaday Divock Origi oo si cajiib ah u koontaroolay ka hor inta uusan taabashadiisa labaad kubada ka dulqaadin goolhaye Picford oo uusan shabaqa gaarsiinin.
Daqiiqadii 44aad Liverpool ayaa heshay goolkii afaraad ee ciyaarta markii ay kubad kale oo rogaalcelis ah soo qaadeen, waxaa kubada soo jiiday Alexander-Arnold kaasoo markii danbe u dhigay Sadio Mane oo isna shabaqa ku hubsaday.
Sadio Mane ayaa dhaliyay 17 gool 17kii kulan uu ku soo bilowday kulan Premier League ah oo lagu ciyaarayo Anfield.
Dhamaadkii qeybta hore ayay Everton gool labaad soo ceshatay markii karoos uu soo dhigay Bernard uu dhaliyay Richarlison. Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay 4-2 oo ay Reds ku hogaamineysay.
Bilowgii qeybta labaad waxba iska bedelin natiijada inkastoo Liverpool ay koontarooleysay ciyaarta iyadoo Sadio Mane uu kubad gool loo fishay qasaariyay daqiiqadii 80aad.
Mar kale ayuu Mane helay fursad loo fishay gool isagoo xitaa u gooyay goolhayaha laakiin waa uu awoodiyay inuu shabaqa dhex dhigo kubada halka Kean uu u dhawaaday inuu gool seddexaad u soo celiyo Everton.
Laakiin waxaa ciyaarta hurdo u diray Wijnaldum daqiiqadii 90aad isagoo shabaqa dhex dhigay baas uu ka helay Roberto Firmino oo ciyaarta bedel ku soo galay.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 5-2 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool kuwaasoo sii xajistay hogaankooda sideeda dhibcood ee horyaalka Premier League madaama Leicester City ay 2-0 kaga badisay kooxda Watford iyagoo ku soo noqday kaalinta labaad.
Hordhac: Liverpool Vs Everton – Klopp Oo Maskaxdiisa Ay Ka Guuxayso Jallaafadii Ay Everton U Dhigtay Xili-Ciyaareedkii Hore, Saadaasha Kulanka, Shaxaha Iyo Wararkii U Dambeeyey
“Aniga Ima Dhibayaan Mane, Firmino Iyo Salah, Mana Barbar-Dhigi Kartid Jamie Vardy Oo Ah Weeraryahan Cajiib Ah” - Tababare Klopp Oo Farriin Cadho Leh Diray Ka Hor Kulanka Everton
"Sadio Mane Inuu Kasoo Jeedo Qaaradda Afrika Ayaa Loogu Diiday Abaalmarinta Ballon d'Or"